कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शवबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? (विरोधाभाषपूर्ण भिडियो) – Satyapati
काठमाडौं । कोरोनाबाट संक्रमण भएका व्यक्तिको शव सरकारले मृतकको परिवार तथा आफन्तलाई छुन दिँदैन, नेपाली सेनामार्फत सुरक्षित किसिमले अन्त्येष्टि गराउने गरेको छ । तर सरकार (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)ले एउटा यस्तो भिडियो सन्देश जारी गरेको छ, जहाँ विज्ञले लासबाट कोरोना नसर्ने बताइरहेका छन् । तर पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने सन्देश दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको भिडियोमा ईश्वर पुडासैनीले कमेन्ट गरेका छन्, ‘कोभिड नसार्ने शवलाई पूर्ण सुरक्षा अपनाई लैजान चाहने परिवारको जिम्मा किन लगाइन्न? किन सेनाको जिम्मा लगाई अज्ञातस्थलमा लगी गाडिन्छ । तथ्य ब्रिफिङ गर्ने पनि मन्त्रालय, सेनासँग समन्वय गर्दै शवलाई अज्ञातस्थलमा गाड्ने पनि मन्त्रालय ! अलि विरोधाभाषपूर्ण छ तथ्य र एक्सन ।’
शवबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको यो भिडियो :